5 Qodob Oo Looga Digay Lammaanaha Nolosha Iyo Saamaynta Ay Ku Yeelan Karaan Xidhiidhkooda - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle 5 Qodob Oo Looga Digay Lammaanaha Nolosha Iyo Saamaynta Ay Ku Yeelan...
5 Qodob Oo Looga Digay Lammaanaha Nolosha Iyo Saamaynta Ay Ku Yeelan Karaan Xidhiidhkooda
Nolosha qoysku waxa ay u baahantahay in mar walba la ilaaliyo oo la koolkooliyo, lagana ilaaliyo wax kasta oo xagal daac ku keena ama wiiqa hanaankii wanaagsanaa ee geedi socodkiisa. Nolosha lamaanuhu waxyaabaha ay u baahantahay waxa lagu tilmaamaa: ilaalinta saxda ah iyo raacidda tilmaamaha wanaagsan iyo sunnuha toosan ee ilaahay SWT u jideeyey.
Qoysas badan ayaa hab nololeedkoodu yahay mid karaahiyo iyo nacayb ka buuxo halka kuwo kale oo badanina ku naaloonayaan farxad iyo rayn rayn joogto ah iyo liibaan adduunyo. Si aynu u hello qoys ku nool farxad iyo wanaag joogto ah waxa aynu u baahanahay in aynu nolosheena qoysnimo ka dhawrno waxyaabahan aynu qormadeena ku soo qaadan doono ee soo socda oo ku keena karaahiyo iyo kala fogaansho nololeed.
labada lamaane waxa loo diiday in ay ilaawaan ama ugu yaraan dhayalsadaan nadaafadda oo ah shay muhiim ah. si aanu midba kan kale u karaahiyaysan waxa lagama maarmaan ah in nadaafaddu noqoto shay muhiim u ah noloshooda qoysnimo.
Labada lamaane waxa loo diiday in ay isku qaylyaan oo ay ka adkaan kari waayaan dareenkooda caadifadeed wakhtiga cadhada. Hadii ay isku cadhoodaan yaanay isku qaylyin oo midba kan kale si xun ugu qaylyin. Waa in aanu gurigu noqon mid had iyo jeer qaylo iyo sawaxan joogto ahi ka baxayo.
Lamaanaha is qaba waxa loo diiday in midba kan kale mar walba ku badiyo dalab joogto ah iyo codsi aan kala go’ lahayn. Midba hadii uu kan kale ku badiyo codsiga iyo in uu markasta wax waydiisto, khubarada qoysku waxa ay ku doodaan in dalabka badani uu khal khal galiyo xidhiidhkii wanaagsanaa ee qoyska.
Lammaanaha nolosha wadaagaya waxa looga digayaa in aanu hoygoodu noqon huteel ay raggu ku kulmaan iyo xarun lagu qaabilo haweenka oo ay isugu yimaadaan. Arrintan waxa looga jeedaa in aanu ninku mar walba gurigiisa ka dhigin xarun ay ku kulmaan ragga asaxaabtiisa ah iyo in aanay haweenaydu gurigeeda ku soo shirin haweenka. Waxa loo baahanyahay in wakhtiyo gaar ah la soo booqdo wakhtiyo gaar ahna gurigu noqdo mid degan oo ay labada lamaane ku nastaan oo aan buuq iyo sawaxan toona lahayn.
Labada lamaane waxa looga digayaa in ay caruurtooda magacyo aan munaasab ahayn u dooraan. Waajibaadka waalidka caruurtooda ka saaran waxa ka mid ah in ay u dooraan magacyo munaasab ku ah diintooda iyo dhaqankooda.
Deg Deg: Muxu Ka Yidhi Madaxweyne Farmaajo Dagaalka Somaliland Iyo Somalia
Ciidamada Badda ee wadamadda Libya iyo Talyaaniga oo badbaadiyay 5,000 oo tahriibayaal ah
Deg Deg: Xisbiga Waddani oo Imika Ka Hadlay Guddoomiyaha Maxakamada Sare Ee U Magacaabay Madaxweyne Farmaajo + Muuqaal
Somaliland: Masuuliyiinta Hore iyo Kuwa Cusub Ee Madaxtooyada Oo Xilalka La Kala Wareegay
Farxada Nolosha & Ganacsigu Kuma Xidhna Oo Kaliya Inaad Haysato Lacag Badan !
Gabadh Xilligii Dhalmada La Waayey Oo La Helay Iyada Oo 18 Jir.